Khasaaro ka dhashay is-rasaaseyn ka dhacday Muqdisho | KEYDMEDIA ENGLISH
Ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya, ayaa maanta isku rasaaseeyey degmada dharkeenley ee gobolka banaadir, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
MUQDISHO, Soomaaliya- is-rasaaseyn saacado qaadatay, ayaa maanta degmada Dharkenleey ku dhex martay, ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya, kadib muran ka dhashay qaad si sharci darro ah lagu soo galinayey caasimadda.
Is-rasaaseynta labada ciidan ayaa timid kadib, is qab qabsi ka dhashay Jaadka Kenya ka yimaada ee mirowga, oo ay qeyb ciidamada ka mid ah doonayeen in geeyaan suuqa jaadka ee Muqdisho, halka kuwa kalana ay ka soo horjeedeen, waxaana is-rasaaseyntooda ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Inta la ogyahay 2- qof oo uu mid ka mid ah yahay, Taliyaha Booliska Waaxda Saddexaad ee degmada Dharkenleey, ayaa ku geeriyooday halka 2 qof oo rayid ahna ay ku dhaawacmeen.
Taliyaha is-rasaaseynta ku geeriyooday, ayaa lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Dheere, wuxuuna watay askartii dooneysay in ay gacanta ku soo dhigto qaadkii sida sharci darrada ah ku soo galay Muqdisho, ee ka yimid dalka Kenya, kaa oo kal hore dowladda Soomaaliya ay mamnuucday.
Taliyaha geeriyooday ayaa sida la sheegay, saaxiib dhaw la ahaa Farxaan Qaroole, oo si toos ah uga amar qaata Farmaajo, waxaana tallaabadan lagu baacsanayo qaadka kenya ay qeyb ka tahay mashruuc suuq loogu yeelayo, jaadka Hareeriga ee Itoobiya ka yimaada, oo usoo dega Farmaajo Walaalkiis.